Semalt မှသင်၏ ၀ က်ဆိုက်ကို Google တွင်ရှာတွေ့နိုင်ရန်နည်းလမ်း ၈ ချက်
ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုရှိခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော်လည်း အရေးကြီးဆုံးမှာ ၎င်းကို Google တွင် မြင်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏ ၀ က်ဆိုက်ကို Google ၏ထိပ်တန်းရှာဖွေမှုများတွင်ပေါ်လွင်စေရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်တော်တော်များများကဒီနည်းလမ်းတွေကိုဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်ရမလဲမသိပါဘူး။
ဤဆောင်းပါး၌၊ ငါတို့သည် SEO အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အချို့ကိုသင်ပြလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်၊ ငါတို့သင်နှင့်မျှဝေလိမ့်မည် SEO ကိုယ်ပိုင် Dashboard ကိရိယာ- သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်မြင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန် အကောင်းဆုံး SEO ကိရိယာ။
မင်းရဲ့ website ကို google မှာပိုရှာတွေ့နိုင်တဲ့ကျန်းမာတဲ့နည်းလမ်းအချို့ကိုဖြေရှင်းဖို့ငါတို့ဒီအကြောင်းကိုအရင်ပြောမယ်။
၁။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏နည်းပညာပိုင်းကိုတိုးတက်စေခြင်း (On-Page Seo)
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်စေရန်၊ သင်စာမျက်နှာပေါ်ရှိ SEO လုပ်ရန်လိုသည်။ စာမျက်နှာပေါ်မှ SEO ဖြင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို google နှင့်လာရောက်ကြည့်ရှုသူများအားပိုမိုဖတ်စေလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်၊ သင်လိုအပ်သည်-
မင်းရဲ့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်ကမင်းရဲ့ ၀ က်ဆိုက်မှာရှိတယ်၊ ဆိုလိုတာကမင်းရဲ့တည်နေရာ၊ အဆက်အသွယ်နဲ့မင်းရဲ့ဖောက်သည်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရဖို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်တဲ့အခြားအချက်အလက်တွေ၊
ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှု၊ အဆက်အသွယ်နှင့်တည်နေရာအချက်အလက်များကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာရှာဖွေနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
ခိုင်မာသောအမှတ်တံဆိပ်ကိုဖန်တီးပါ။ Google သည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ရုံသာမကအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဧည့်သည်ဘလော့များသို့မဟုတ်ဖိုရမ်များမှလင့်များကိုကြည့်သည်။ အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များက သင့်အား ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပုဂ္ဂိုလ်/လုပ်ငန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Google သည်သင်နှင့်တူပါလိမ့်မည်၊ သင် Google တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်၌ပိုမြန်လိမ့်မည်။
ယုတ္တိဗေဒအရဧည့်သည်တွေကသူတို့ကိုမကူညီဘူးဆိုရင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာဘာမှလုပ်စရာမရှိပါဘူး။ ဤအတွက်သင်သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို Google တွင်ရှာရလွယ်ကူစေရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေခြင်းဖြင့်သင်၏ဧည့်သည်များအကြောင်းကိုလေးနက်စွာစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ DSD tool ကိုအသုံးပြုရန် အကြံပြုခြင်းဖြင့် သင့်အား ကျွန်ုပ်ကူညီသည်- သင့်အကြောင်းအရာ၏အကြောင်းအရာများကို ပြီးပြည့်စုံစေရန် အလွန်ထိရောက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၃။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၌ယုတ္တိရှိသောနေရာများ၌သင်၏သော့ချက်စာလုံးများကိုထားပါ
မင်းရဲ့ ၀ က်ဆိုက်ကိုရှာတွေ့နိုင်တာကမင်းရဲ့သော့ချက်စာလုံးတွေကိုသေသေချာချာဆန်းစစ်ကြည့်ရင်အလွယ်တကူတိုးတက်လာနိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့် SEO Personal Dashboard မှတဆင့်သင်အသုံးအများဆုံးနှင့်အသုံးအများဆုံးသော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်သင်၏သော့ချက်စာလုံးများကိုသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အောက်ပါနေရာများ၌သင်ထည့်လိမ့်မည်။
သင့်စာမျက်နှာ၏ ခေါင်းစဉ် (<title>၊ <h1>)။
သင်၏စာမျက်နှာ (သို့) ဆောင်းပါး၏နိဒါန်း (ပထမစာလုံး ၁၅၀) တွင်
meta ခေါင်းစဉ် (အစတွင်) နှင့် meta ဖော်ပြချက်
သင်၏ထိပ်တန်းအဆင့်ခေါင်းစဉ်အချို့ (h2, h3)
သို့သော် သင့်သော့ချက်စကားလုံးကို မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းသည် Google ရှိ သင့်ဝဘ်ဆိုက်၏မြင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အလွန်အကျွံမသုံးပါနှင့်။ သင်အကူအညီလိုလျှင်၊ သွားခြင်းအားဖြင့် SEO ပညာရှင်များအားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည် semalt.com
4. Keyword ရှာပါ
သော့ချက်စာလုံးများသည်သူ့အလိုလိုဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အလားအလာရှိသော ဧည့်သည်များ ရှာဖွေနေသည့် စကားလုံးများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်အချက်အလက်များနှင့်ဧည့်သည်တို့၏ရှာဖွေမှုများနှင့်ကိုက်ညီစေရန် Google သည်ဤစကားလုံးများကိုသုံးသောကြောင့်သော့ချက်စာလုံးများသည်အရေးကြီးသည်။ သော့ချက်စာလုံးများသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အကြောင်းအရာနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီလေလေ Google သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ပိုမိုမြင်သာစေသည်။
ဒါကြောင့်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကမင်းအလားအလာရှိတဲ့ဧည့်သည်တွေဘာကိုရှာနေလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့ဘဲ။ ထို့နောက်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့သင်၏ website သို့မ ၀ င်ရောက်မီအသုံးပြုခဲ့သောရှာဖွေမှုစာလုံးများအားလုံးကိုသင်၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်တင်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ မင်းရဲ့ပြိုင်ဖက်တည်နေရာကို သိထားရင် မင်းရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ရှာတွေ့အောင်လုပ်တာက ပိုလွယ်တာကြောင့် မင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကို မင်းရှာလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သော့ချက်စာလုံးသုတေသနနှင့်ပတ်သက်သောအခက်အခဲအားလုံးကိုသက်သာစေရန်ငါအကောင်းဆုံးသောအကြံပြုချက်မှာ DSD tool ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
၅။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်သင်၏ ၀ က်ဆိုက်ကို Google တွင်ရှာပါ
လူများသည် Google တွင်အထူးသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေသည်။ ထို့ကြောင့်တန်ဖိုးရှိသောအကြောင်းအရာသည်ဧည့်သည်အားသူတို့ရှာဖွေနေသောတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များပေးနိုင်ရန်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်ရှာဖွေနေသည့်အရာကို စဉ်းစားရန်မှာ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် Google ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဧည့်သည်များကိုအကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလတ်များရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် content marketing သည် search engine optimization ၏အရေးကြီးဆုံးအချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်အရည်အသွေး၊ တန်ဖိုးရှိသော၊ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများမရှိလျှင်မည်သည့် website ကိုမျှမြင်နိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
၆။ Off-Page Referencing ကိုရှာဖွေပါ
Off-page SEO သည် စာမျက်နှာပေါ်ရှိ SEO နှင့် မတူဘဲ သင့်ကိုယ်ပိုင် ဝဘ်ဆိုဒ်၏ မူဘောင်နှင့် မကိုက်ညီသော ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုတာက၊ မင်းရဲ့ website ကို Google မှာအလွယ်တကူရှာလို့ရအောင်၊ မင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတိုက်ရိုက်မပြင်နိုင်တဲ့နေရာ၊ off-page SEO ပုံစံမျိုးဘဲ။
အမှန်တော့ off-page SEO မှာအစိတ်အပိုင်းများစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းနှစ်ခုကတော့ link building နဲ့ social media ပါ။
link building နှင့်ပတ်သက်လျှင်ဤအရာသည် off-page SEO ၏အကြီးမားဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သင့်တွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုများစွာရှိသောအခါတွင် လင့်ခ်တည်ဆောက်ခြင်းအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုကြပြီး သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို Google တွင် ရှာဖွေနိုင်စေရန်အတွက် ကြိုးစားအားထုတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် Google ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုအတိအကျသိဖို့အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သို့မှသာသင်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုတက်နိုင်ပြီးသင့်ဖောက်သည်များပိုမိုကောင်းမွန်စွာတွေ့နိုင်သည်။
အချက်အလက်များအပြင် Google သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တိုင်း၌လင့်များကိုရှာဖွေသည်။ Google သည်ဤလင့်ခ်များကိုတွေ့ရှိလျှင်၎င်းအား၎င်းတို့အား website အတွင်းမှစာမျက်နှာများနှင့် website အပြင်ဘက်ရှိစာမျက်နှာများသို့ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ ထို့နောက် သင့်တွင် အရေးကြီးသောလင့်ခ်များ သို့မဟုတ် အရေးနည်းသောလင့်ခ်များရှိပါက Google သည် စိတ်ချသေချာပါသည်။ ထို့ကြောင့် Google သည်လင့်များကိုစကင်ဖတ်ပြီးဤလင့်ခ်များကိုမဲပေးစနစ်အဖြစ်သုံးသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့ညွှန်သော link များလေလေထို website သည်ပိုအရေးကြီးလေဖြစ်သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ပတ်သက်လျှင်၎င်းသည် Google ၌ပိုမိုမြင့်မားသောရာထူးရရှိရန်ကူညီသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်လူတို့သင့် website ကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းကိုသေချာစေသည်။ ထို့ကြောင့် Google သည် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို မည်မျှလက်ခံသည်ကို သိရန် အချက်များစွာကို ကြည့်ရှုသည်။
Session အရှည် (သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဧည့်သည်များမည်မျှကြာအောင်နေရမည်နည်း)
Bounce နှုန်း (သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အား ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပြုဘဲ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုသူရာခိုင်နှုန်း)
ဤရလဒ်များအားဖြင့်၊ သင်သည် လူမှုကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် မှန်ကန်သောလူများ (သင်၏ပစ်မှတ်အုပ်စုရှိလူများ) ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသောအခါ၊ ဤဧည့်သည်များသည် သင့်အကြောင်းအရာကို စိတ်ဝင်စားကြသည်မှာ သေချာသလောက်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သူတို့စေ့စပ်လိုက်သောအခါသူတို့သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အချိန်ပိုပိုပေးပြီးစာမျက်နှာများကိုပိုကြည့်ပြီးသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ပိုမိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ကြသည်။
ထို့ကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်သင်၏ရှာဖွေနိုင်မှုကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသောအရေးကြီးဆုံးအချက်များပေါ်တွင်ကောင်းစွာအမှတ်ရစေရန်အာမခံသည်။
Google သည်အင်တာနက်၏အရွယ်အစားကြောင့်အလွန်ကြီးမား။ ကျယ်ဝန်း။ ကြီးမားသည်။ အင်တာနက်သည် အကန့်အသတ်မရှိသောကြောင့်၊ ပြသရန်ကောင်းသော ဝဘ်ဆိုဒ်များစွာနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါင်း တစ်ဘီလီယံကျော်ရှိသည်။ ဒါကြောင့် Google က web ကို ၀ င်ရောက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေရမယ်။
ထို့ကြောင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်အကောင်းဆုံး website ကိုဆုံးဖြတ်ရန် Google သည်အချက်များစွာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ခေါင်းစဉ်များ၊ အကြောင်းအရာများနှင့်လင့်များကိုရှာဖွေခြင်းအပြင်၊ Google ရှာဖွေမှုသည်ပိုအရေးကြီးလာသည့်အခြားအချက်တစ်ခုရှိသေးသည်။ ပြည်တွင်းရှာဖွေမှု
နည်းပညာသည်လူသားအားလုံးအတွက်ပိုပိုပြီးလက်လှမ်းမီလာသည်နှင့်အမျှပြည်တွင်းရှာဖွေရေး SEO မှတဆင့် Google သည်ရှာဖွေမှုများမည်သည့်နေရာမှပိုမိုလွယ်ကူစွာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
8. သင့်ဆိုက်ကို Google သို့ တင်သွင်းပါ။
မင်းရဲ့ ၀ က်ဆိုက်ကအစဉ်လိုက်ဖြစ်နေပြီးမင်းစာတွေကပိုကောင်းလာတဲ့အခါမင်းက Google ကတဆင့်မင်းဖောက်သည်တွေဆီကိုရောက်ဖို့တော်တော်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်မင်းရဲ့ website ကို Google က index လုပ်နိုင်မှာသေချာတယ်။ Google Places၊ Google Search Console နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အပြင်သင်သိသင့်သော Google မှနောက်ဆုံး tool တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ ၀ က်ဆိုက်၏စာရင်းဇယားအားလုံးကိုရယူနိုင်ရန် SEO ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြစ်သည်။
ဤ tool မှတဆင့်သင်ဘယ်စာမျက်နှာနှင့်ဘယ်ဧည့်သည်သည်စိတ်မဝင်စားသည့်စာမျက်နှာများကိုလျင်မြန်စွာမြင်နိုင်သည်။ စာမျက်နှာတစ်ခုသည်အရည်အသွေးညံ့လျှင် Google သည်၎င်းကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သင့်အားရာထူးမြင့်ရန်အလားအလာနည်းလိမ့်မည်။ အဲဒါကြောင့် အသုံးပြုဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ SEO ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖောက်သည်အသစ်များကိုဆွဲဆောင်ရန် Google ၌အမှတ်မြင့်ရန်။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အားအညွှန်းချသောအခါ Google သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အားအလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူအားသင်၏လုပ်ငန်း (သို့) အဖွဲ့အစည်းအားရှာဖွေသည်နှင့်တပြိုင်နက်စဉ်းစားလိမ့်မည်။ ညွှန်းဆိုထားသောအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၌ဧည့်သည်၏ရှာဖွေမှုကိုအဖြေပေးလိမ့်မည်ဟု Google ကဆုံးဖြတ်သည်။ Google ကဒီမေးခွန်းကိုအကောင်းဆုံးဖြေဆိုပေးတဲ့ website ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးအဲဒီ website ကိုအဆင့်မြင့်နဲ့ဆုချလိမ့်မယ်။
မင်းနားလည်မယ်လို့ ငါမျှော်လင့်ပါတယ်- မင်းရဲ့ရာထူးမြင့်လေ၊ မင်းရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်က မင်းရဲ့ဖောက်သည်တွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေလေလေပါပဲ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့မင်းမှာ Google ကိုနှစ်သက်တဲ့ website တစ်ခုမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းအလားအလာရှိတဲ့ဖောက်သည်တွေဆီကိုရောက်အောင်သွားပြီးမင်းဘယ်သူလဲ၊ မင်းကဘယ်သူလဲ၊ ဘာကြောင့်သူတို့နဲ့နေသင့်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြဖို့ website တစ်ခုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့မင်းရဲ့ website ကို Google မှာရှာသင့်တယ်။ ဤအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အလေးထားသင့်သော SEO ၏ကောင်းမွန်သောအလေ့အကျင့်နှင့်အတူအရေးကြီးသောနည်းလမ်းအချို့ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးပြီ။
ထို့အပြင်၊ သင်၏ ၀ က်ဆိုက်ကို Google တွင်ရှာဖွေနိုင်စေမည့် all-in-one tool ကိုသုံးရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ ၎င်းသည် အလွန်ထိရောက်သော DSD SEO tool ဖြစ်သည်။ Semalt SEO အေဂျင်စီ သင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုထား။ Semalt ၏ပန်းတိုင်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များအား၎င်းတို့၏ web page ကို Google ပေါ်တွင်ထိရောက်စွာမြှင့်တင်ရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။